Defold: muchinjikwa-chikuva giraidhi injini inoenda yakavhurika-sosi | Linux Vakapindwa muropa
Defold iri muchinjika-chikuva mutambo injini iyo yava yakavhurwa sosi kubvira Defold Foundation yaiburitsa pasi pechirevo chitsva. Iwe unenge watoziva kare kuti muridzi wayo aive King, akakurumbira nhare mbozha yemavhidhiyo mutambo, saiye anozivikanwa Candy Crush. Zvakanaka, ikozvino ichave yakavhurika uye inogona kutungamira kune akawanda anonakidza mapurojekiti.
Kana iwe uchirangarira, Defold anga atove yemahara pamberi uye muchinjika-chikuva sezvandataura, asi mushure mekuzivisa uku imwe nhanho inotorwa. «Isu tinodada nekukwanisa kuvhura Defold senge yakavhurwa sosi uye hatigone kumirira kutanga rwendo rutsva pamwe nenharaunda yedu yevagadziri vemitambo yemavhidhiyo kugadzira mitambo vachishandisa iyi injini yemifananidzo.»
La rezinesi nyowani Defold inotorwa yepamutemo Apache 2.0 rezinesi. Iwe unotoziva kuti iyi Apache 2.0 inogamuchirwa neOpen Source Initiative (OSI), kunyangwe ini ndisingazive kuti zvakagadziriswa zvakadii kubva panheyo zvichachinja uye kana zvichinyatso kunzi "open-soure" kana 100% yakavhurwa sosi ... Zvichida zvingave zvakaringana kutaura kuti "inowanikwa".
Boka idzva rebudiriro uye Defold Foundation, zvinoita sekunge vndichiri munzira chaiyo, zvirinani kana zvasvika kune vashandi. Ivo vava naMambo vanogadzira pane yavo bhodhi revatungamiriri, pamwe chete nemukuru wavo Sara Cedberg, nevamwe vepamusoro indasitiri vanhu vakaita saElin Eriksson (weVakadzi muTech Sweden).
Chokwadi pachave nemamwe mashoko pamusoro peiyi injini yemagetsi munguva pfupi. Defold ine zvainogona uye nezviripo masosi ichakwanisa kupa zvinhu zvitsva. Uyezve, ndizvo inoenderana neGNU / Linux zvese kugadzira neyagadziri kubva pachikuva ichi uye kugadzira mitambo yemavhidhiyo yeiyi chikuva. Uye iri kugamuchira mipiro yekutsigira ine simba Vulkan graphical API. Zvidimbu zvakawanda zviri kutanga kukwana pamwe uye zvinogona kugadzira chinonakidza ...
Yepamutemo Webhu - Defold
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Defold: muchinjika-chikuva giraidhi injini inoenda yakavhurika-sosi
Yemahara software haina, nekuti ivo vakagadzirisa iyo Apache rezinesi kuti iwe ugone kutengesa zvakagadziridzwa shanduro dzeinjini.
Kubva pawebhusaiti yake: «Iwe haugone kushambadzira epakutanga kana akagadziridzwa (akatorwa) shanduro dzeDefold mupepeti uye / kana injini»
Uye yakavhurwa sosi, chero, ingogovaniswa sosi kana chimwe chinhu chakadai.
Usaone dambudziko rakawanda rakaiswa pa twitter (uye ini ndazvinzwawo pa news.ycombinator), pa twitter maungira acho akabva kuna Godot kuti pakutanga vakaita rutsigiro rweveruzhinji asi mushure memitezo yenhengo yeGodot yakatanga tsanangura kuti yanga isiri yakavhurwa sosi.
Kana kodhi yekodhi iripo, saka iri "Vhura Sosi".
Izvo zvinotevera huzivi / maitiro eGNU kana OSI chimwewo chinhu.
Nekudaro zvinopesana nesoftware yemahara zvinoshandisa kushandiswa kweshoko rekuti "Vhura sosi" ...
Ichokwadi ndechekuti ini handina kuzviedza, asi ine mweya weGodot injini izvo zvinoita sekunge kuti vakaiwana kubva ipapo.
Ubuntu 20.04: maitiro ekuisa Kubatana pane iyi vhezheni yedistro